Gool-hayihii da'da yareeyd ee kooxda haweenka qaranka Gambia oo kamid noqotay dadkii ku qaraqmay badda Mediterranean ka - Horn Future
Rome-Gool-hayahii da’da yareyd ee kooxda haweenka qaranka Gambia ee kubada cagta Fatiim Jawaara ayaa waxa ay kamid ahayd dadkii ku qaramay badda Mediterranean kadib isku day ay ku dooneesay in ay kusoo gaadho dalka Italy sida warbaahinta caalamku ay qortay maanta.
Qoyska gabadhan oo warbaahinta la hadlay ayaa waxa ay u sheegeen in ay damacsanayd in ay “raacdo aayeheeda” oo ay u ciyaarto kooxaha waa weyn ee qaaradda Yurub “halistu nuuca ay dooni ha ahaatee”.
Fatim Jawaara oo 19 jir ahayd, ayaa waxay saarnayd doon ku degtay dabayaaqadii toddobaadkii la soo dhaafay markii ay ku dhifatay duufaan kadis ah intii lagu guda jiray ka gudubka Libya ilaa Italy.
Waxa xidhiidhkii u dambeeyay ee qoyskeegu uu la yeeshay Fatiim Jawaara ay iska diiday codsi uga yimiday oo ahaa in ay kusoo laabato deegaankeega oo kuyaala xeebta Atlantic ga ee Gambia, sida laga soo xigtay saaxiibadeed oo ugu dhawayd.
Waxa xusid mudan in Qaramada Midoobay ay sheegtay shalay Khamiistii in ay ku qaraqmeen xeebaha Libya ugu yaraan 239 tahriibayaal ah ka dib markii ay is-jiidheen 2 doonnyood oo ay saarnaayeen.
Afhayeen u hadashay shalay hay’adda qaxootiga u qaabilsan Qaramada Midoobay Carlotta Sami ayaa sheegtay in 2 ka mid ah dadkii kasoo badbaaday shilkan oo soo gaadhay gasiiradda Italy kutaala ee Lampedusa kuwaasoo xaqiijiyay macluumaadkan.
Leonard Doyle oo kamid ah afhayeenada madaxda sar sare ee Ururka Caalamiga ah ee Socdaalka (IOM) ayaa sheegay in 4220 qof ay ku dhinteen badda Mediterranean tan iyo bilowgii sanadka.
Dhinaca kale, urruka xuquuqda u dooda ee Amnesty International, “Amnesty International” ayaa ku eedeeyay xubno katirsan booliiska Italy in ay billaabeen inay habab “u dhigma jidh-dil” si aad ay uga qaadaan dadkan sawirka faraha diiwaan galinta,waxana qayb kamid ah mas’uuliyadda ay dusha ka saartay Midowga Yurub.
« Djibouti : un carrefour entre monde Arabe et Afrique sur le point d’imploser ?	» Maleeshiyooyinka taageera Trump oo isku diyaarinaya rabshado hadii ay guuleeysato Hillary Clinton